Finoana katolika: vonona handray ny kardinaly Tsarahazana ny ao Toamasina | NewsMada
Par Webmaster Two sur 09/07/2018
Andro vitsy sisa. Efa tsara fiomanana sy maty paika avokoa ny fombafomba sy ny arofenitra handraisana ny kardinaly, ny Mgr Tsarahazana Désiré, ao Toamasina. Hotsenain’ny kristianina sy ny vahoaka amin’ny fomba makotrokotroka eny amin’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy ny tenany, ny marain’ny alakamisy 12 jolay izao. Hitohy amin’ny diabe mamakivaky ny tanànan’ i Toamasina izany, hatreny amin’ny
toeram-ponenany ao amin’ny katedraly St Joseph, Ampasimazava. Arahin’ny fanehoan-kevitra sy fijoroana vavolombelon’ny fiainan’ny Mgr Tsarahazana Desiré izany, ny harivan’io amin’ny 6 ora, ao amin’ny Ekar Notre Dame de Lourde, Anjoma. Manomboka amin’ny 9 ora maraina kosa, ny alahady 15 jolay, ny Sorona masina hatao ao amin’ny kianja
malalaka Stela Maris, Androranga. Nohamafisin’ny vaomieran’ny fampitam-baovao eo anivon’ny diosezin’ i Toamasina, tarihin’ny pretra Lebamisaina Paques Adoré, fa efa azo antoka 100% ny fandaminana rehetra. Tsy ho raharahan’ny any Toamasina samirery anefa izany fa ho avy marobe koa ny avy aty amin’ny diosezin’Antananarivo sy ny faritra hafa.
Higadona eny Ivato rahampitso
Efa fandaminana farany tany anivon’ny isam-piangonana sy ny distrika ny omaly, nandritra ny fotoam-pivavahana, ho an’ireo handeha hanatrika izany lamesa voalohany ho an’ny any Toamasina izany. Mialoha ireo, higadona etsy Ivato, ny talata tolakandro izao, ny kardinaly Tsarahazana Desiré. Hihazo ny Nonce apostolique Ivandry. Hitohy amin’ny Sorona masina etsy amin’ny Ekar Antanimena izany, ny alarobia hariva amin’ny 5 ora.
Tsiahivina fa 63 taona izao ny kardinaly Tsarahazana Desiré. Eveka voalohany tao amin’ny diosezin’ i Fenoarivo Atsinanana ary nisantatra voalohany ny maha arsevekan’ i Toamasina azy avy eo.